Sentinel Lobby 2 sezvaunenge watonzwisisa kare, ndiyo yechipiri yekuwedzera yezvakanakisa ►Lobby Miner, yekutanga online roulette software iyo inokutendera iwe kuongorora munguva chaiyo nezve 20 matafura roulette.
Kuti ubudirire pachirongwa ichi saka zvakafanira kuti utotenga iyo ► manyorerwoLobby Miner, zvakadaro, kana uchitova nemafaira ezvinyorwa neinoshambadzira dura remamwe matafura eroulette, unogona kushandisa zvakachengeteka chirongwa sezvaunoda, zvakare nekuti mu Sentinel Lobby 2 kune mamwe mabasa anonakidza asinganetse chete iyo data yakaunganidzwa naLobby Miner.
Mashandiro anoita Lobby Sentinel 2
Sentinel Lobby mukudzidzira inosungira mafaera akanyorwa panguva chaiyo na ►Lobby Miner uye inotsanangura huwandu hwenzvimbo dzakabatana kune kuwanda kwenhamba imwe chete, chakakosha chokwadi icho chinogona zvakare kubatsira mutambi kuti aone kuvepo kana kwete kwe kusarura Roulette.
Ini ndanga ndanyora zvakawanda pamusoro wenyaya wekusarura, verenga posvo yekuratidzira yebhoti ► Roulette Bias Sniper kuti unzwisise zvirinani mazano ese akavakirwa Sentinel Lobby 2 uye kuti unganyatsoishandisa sei.
Chinhu chekutanga kuita kudzvanya pane bhatani Reload Roulette Matafura, nenzira iyi vanozoiswa mukati Sentinel Lobby 2 mafaera ese ematafura akasarudzika akasarudzika uye muchazoona kuti nhamba dzenhamba dzakanyorwa dzichaonekwawo (Spins ikholamu), Ipo ikholamu yekutanga (Roulette #) inongoshanda chete kuzivisa tafura ine nhamba inofambira mberi 01, 02, 03, nezvimwe.
Panguva ino zvakafanira kuita kumbomira kwakakodzera kuti utsanangure kuti ndeapi marudzi ehuwandu akaongororwa Sentinel Lobby 2.
Kana isiri yako yekutanga nguva kushanya ThatsLuck.com, pamwe wakaverenga chimwe chinhu nezve Muganho Wakapfava mune iyo posvo yakatsaurirwa iyo Roulette bot ► Roulette Bias Sniper.
Kana iwe uchinyatsoda kuverenga pamusoro penyaya iyi, ndinokurudzira kuti uverenge (kana kuverenga zvekare) iyo posvo, panguva yacho, muchidimbu, tinogona kuti Muganho Wakapfava hapana chimwe chinopfuura a value iyo inotitaurira kana nhamba dzetafura yeroulette iri kubuda kazhinji kazhinji kupfuura zvakajairwa.
Tafura inosanganisirwa muchirongwa yakavakirwa pa Zana matinji imwe neimwe, kubva pa100 kusvika ku10.000, chidimbu chega chega chinoonekwa neminda chena, nepo kurudyi tinowana kukosha kweiyo Muganho Wakapfava.
Semuenzaniso kwe 100 spin tranche iyo Soft Limit kukosha iri 28, kune mazana maviri ekuruka zviri 39 zvichingoenda zvakadaro.
Mukuita, sekubuda kwenhamba, chirongwa ichi chinowedzera kukosha kwakanaka kwenhamba dzese dzakaburitswa (kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve kukosha kweiyo nhamba, uchawana zvese zvakanyorwa ► qui), Iyi sum inomiririra Yakakodzera Kukosha kweTafura yese, iyo inonzi mukati PV ikholamu.
Kana iyo PV yetafura yese ikapfuura kukosha kweSoft Limit yeiyo yakanyorwa spin tranche, zvinoreva kuti isu tiri mune "isingawanzo" gap, izvo zvinoitika zvinoitika chete 5% yenguva. Isu tinogona saka kuti zviri paavhareji zvakaoma kuti tafura ipfuure iyo Yakapfava Limit.
Panguva ino zvinhu zviviri zvinogona kuitika:
► iyo Trend inodzokera zvishoma nezvishoma kuchimiro (saka kukosha kwePV kunowira pasi peSoft LImit);
► iyo tsika inoramba ichikwira.
Kana, sekune 2, iyo tsika inoramba ichikwira, isu ngatitangei kuvavarira.
Maitiro ekushanda saka akapusa. mushure mekutanga ►Lobby Miner Ngatitange Sentinel Lobby 2 (uko kwatakatogadzirira iyi link kune matafura akasiyana-siyana atinoda kuongorora), panguva ino, nekuti zvinogona kutora nguva yakareba mamiriro emutambo asati agadzirwa, tinotangaAutominer, inoratidza kutanga mumunda pazasi pematafura mangani anofanira kuongororwa (ini ndinowanzoisa 1 miniti).
Ipapo ini ndinogonesa iyo sarudzo Ruzha Rwokuzivisa (chenjedzo yeruzha) kana Email Alert (email yambiro) uye kana mukati mezuva tafura inopfuura iyo Yakapfava Limit (izvo, sezvambotaurwa, zvinongoitika mu5% yezviitiko), ini ndichanzwa alarm inonzwika kana kugamuchira email.
Panguva ino ndinogona zvakare kudzikisa chirongwa kubha rebasa uye kuramba ndichishandisa PC zvakajairika, kana paine chinhu chikaitika ini ndichaona zvechokwadi.
Kana alarm ichingorira (tafura ine huwandu hwakawanda hwehuwandu chete enhamba), mu PV ikholamu kukosha kunoenderana netafura zvinogona kusarura anova tsvuku uye panguva ino chikamu chinoshanda chinokonzereswa, ndiko kuti, iwe unotanga kubheja!
Panguva ino, tinya pabhatani bhatani re FIght ikholamu! patafura yakaratidzwa uye iyo inoshamisa ichavhura ipapo ...
L'Autopilot zviri chaizvo a clicker, iyo inonongedza chete nhamba dzechido chedu, ndeavo vese vane imwechete yakanaka kukosha mukuru kupfuura masere.
Ini ndaifarira kudzikisa munda chete kune aya manhamba kune vamwe zvikonzero zvine musoro: Chekutanga pane zvese ichokwadi kuti kukosha kweSoft Limit kunopihwa simba nenhamba dzese dzakanaka, nekudaro idzo dzine kukosha kwakaderera pane masere, asi pahwaro hweyakawanda miedzo yemunda, ini ndaratidza kuti kubheja nhamba dzese dzakanaka zvinoreva kugadzirisa pane imwe renji yegumi nemashanu zviyero zvekubheja, izvo mukuita zvinenge zvakaenzana nekubheja semuenzaniso paRutsvuku kana Dema.
Nekuita izvi, mutero unorema zvakanyanya, zvakanyanya pamutambi, zvirokwazvo manhamba ane PV yakakura kudarika masere ari paavhareji isingasviki 8, chinhu chinotendera mutambi kuti azviratidze zvishoma uye pamusoro pezvose kuvhara kurwiswa zvakanaka kunyangwe kana kukosha Iyo tafura PV inowira pazasi peiyo yeSoft Limit.
Kune rimwe divi, pfungwa yacho inonyatso kuzivikanwa, nekubheja mukana wakajairika senge Red, mutero unoita kuti zvikone kuhwina mukati meanosvika makumi mana emakumi emakore, uku uchitaura nenhamba imwe chete, kunyangwe mushure memazana maviri ezviuru zvinokwenya kune zvimwe (max 40.000 kana 200.000) zvichiri zvakanaka.
Iyi dzidziso yekuti iwe unogona kuzviongorora nekuzvitora nekushandisa software ► Roulette Bias Sniper, iyo inosanganisirawo isina kujairika jenareta yakakodzera chete iyi mhando bvunzo.
Kunze kwaizvozvo, zvakare gara uchiziva kuti muitiro wekukunda weboka diki renhamba unogona kugara kusvika mazuva mana!
Saka usazvidya moyo kana kwemaawa nemaawa pasina zviratidzo zvehupenyu kubva pamatafura, hazvitore zvakawanda kuti tsika itange kutora chimiro uye inogara kubva kune mashoma kurova kusvika kuzviuru zviuru zvemazino.
Zviripachena kana muitiro unogara kupfuura zvakajairwa, kana kana kukosha kweiyo Runyoro LImit inotosvika iyo yeZvakaoma Limit (idzi pfungwa dzakatove dzakafukidzwa zvakanyanya ► qui), zvino zvinoreva kuti tiri pamberi pe 100% yakasarura roulette!
Mune ino kesi isingawanzo uye ine rombo rakanaka, ini ndinokurudzira kusiya Lobby Sentinel 2 uye nekukasira kuita bot ► Roulette Bias Sniper, zvirokwazvo kuwedzera kuita pane imwechete roulette uye nemamwe maparameter ekumisikidza kurwisa kunobatsira.
Iyo AutoPilot inogona kugadziridzwa nenzira imwecheteyo kune mamwe mapurogiramu ThatsLuck, senge ► Roulette Turbo Clicker, zvinongogumira tarisa sarudzo Spacebar Turbo Config uye gadza mbeva pane akasiyana manhamba emutambo mat kuti utore X / Y zvinongedzo zvinoenderana nenzvimbo yenhamba dziri pachiratidziri.
Izvo zvinoenda kune iyo Trigger Point, apo kumisikidza bheji Anti Disconnenction tinofanira kuenderera mberi nemaoko.
Kupinda mahurongwa uye iyo kodhi yemavara yeTrigger Point, ini ndinongofanirwa kugonesa sarudzo Spacebar Turbo Config, ndiise panhamba 1 painowoneka (mune poindi iyo Colour Code yakaratidza mune Pixel Info bar è ClWhite semumufananidzo) e tinya nzvimbo kamwe chete pane keyboard.
Kana iwe watove waverenga izvo zvinyorwa kana kurodha pasi iyo ► Roulette Turbo Clicker kana ► Roulette Bias Sniper, unotoziva chaizvo zvandiri kutaura nezvazvo, zvikasadaro tarisa vhidhiyo pane ► chiteshi YouTube iyo inoratidza maitiro akareruka ekuita.
Chekupedzisira, muchiratidziro chekupedzisira tinowana iyo yekumisikidza paramita yeiyo 2 marudzi ezveruzivo yakapihwa mupaneru Kudzora Kamuri.
Kana iwe ukarega ichienderera Taura zviri pachena kuti iwe haunzwe chero chinhu kunyangwe iwe waita yambiro alarm, saka gadzirisa zvinoenderana.
Kupfuurirazve pasi tinowana marongero emamiriro ezvinhu kana tichida kugamuchira maemail nguva dzese panoridzwa alarm (zviri pachena kuti ingashandiswa kana isu tavhura iyoAutoMiner).
Sem parameter iwe unofanirwa kuisa izvo zvebhokisi rako retsamba, izvo zvinozoguma zvese semutumi uye semugashiri yambiro mameseji, kana iwe unogona kushandisa rakasiyana rebhokisi retsamba iro iwe raakazvimisira wega semutumi.
Zvese zvigadziriso zvemabhokisi aya zvinochengetwa imomo paPC yako mufaira pamwe ne .ini yekuwedzera iwe yaunowana mukati mechirongwa dhairekitori, hapana dhata rinounganidzwa kana neimwe nzira inotakurirwa kunze.
File Download	LSentinel2.zip - 4 MB